Soosaarka Shiinaha Pee pads iyo Warshad | Bondhot
LIX halabuur lakab:
Tan 1aad: Dhar aan tolmo lahayn;
Tan 2aad: Waraaqda sare ee warqadda;
3aad: USA qasabado Fluff qasab ah: Qashin qalalan ayaa laga keenaa USA,
asal ahaan ka soo jeeda Waqooyiga Ameerika
Midda afraad: polymer-nuuga badan: dhuuq oo quful dareeraha. dareeraha u beddelaa jel;
Tan 5aad: Xaashida Cadka;
6-aad: Qeybta hoose ee filimka 'PE': caddeynta daadinta iyo safka PE-ga ee biyuhu xireen si looga fogaado dareeraha inuu dhulka ugu soo dago;
Cabirro caan ah ayaa la heli karaa
Suuqa Koonfur Bari Aisa S: 45x33cm, M: 60x45cm, L: 60x90cm;
Suuqa South Korea 40x50cm, 60x75cm
Suuqa America 21x21inch, 22x22inch, 23x23inch, 24x24inch; 27.5 × 35.8inch
Suuqa Yurub 60x60cm, 60x90cm;
Qaar kale Sida looga baahan yahay macmiilka.
1. Haddii aad rabto inaad ku horumariso badeecadan calaamaddaada khaaska ah, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa dhimis-gooye (xariijiye gooye) tixraacaaga naqshadeeye labadaba boorsooyinka iyo sanduuqa. Waxaad soo bandhigi lahayd xirmada garaafka markii la helo, waxaan u sameyn doonaa nooca daabacaadda si loo xaqiijiyo. Wax soo saarka baakadaha cusubna way sii socon doonaan oggolaanshahaaga ka dib.
2. Xidhmadayada la heli karo:
Inkasta oo kharashka horumarinta calaamadaha gaarka loo leeyahay waxyar ka sarreeyo bilowga sababtoo ah daabacaadda qiimaha saxanka iyo daabacaadda MOQ. Marka haddii sumadda gaarka loo leeyahay aysan daruuri ahayn, waxaan jeclaan lahayn inaan kugula talinno sumadeena iyo xirmada la heli karo si aad tixraac ugu sameyso.
3. Boorso cad + kaar midab leh / istiikar ah, noocan ah, waxaad ku daabacan kartaa LOGO-kaaga kaarka / warqadda.
4. Sanduuqa midabka. Haddii xirmada lagu tiriyo in ka badan 100pcs, sanduuqa midabka ayaa ka fiican xulashada. Sanduuqa midabku ma laha kharash saxan daabacan laakiin MOQ waa 2000pcs.
Xirmada banaanka waa kartoon laba jibbaaran oo midabkeedu laba yahay kaas oo socon lahaa tijaabada kahor dhalmada. Sanduuqa kartoonka ayaa aad u adkeysanaya, Tayada lagu hubinayo maraakiibta iyo keydinta badda
6.Xilliga uu dhacayo badeecada waa 3 sano.
7. Shuruudaha lacag bixinta:
30% T / T oo ah deebaaji, inta soo hartay 70% oo ka dhan ah nuqulka B / L.
8. Maxay yihiin iibka, soo celinta iyo siyaasadda dammaanadda kadib?
Faallo celintaada ku saabsan alaabtayada si weyn ayaa loo qadarin doonaa. Waxaad kala xiriiri kartaa adeegga macaamiisha wixii su'aalo ah. Waxaan leenahay si adag maaraynta tayada ka hor, on-iyo ka dib soo-saarka. Dhammaan cilladaha soo baxa waa in lagu go'aamiyaa heerka warshadaha oo lagu xalliyaa wadahadal saaxiibtinimo. Waan falanqeyn doonaa sababta oo waxaan ka shaqeyn doonnaa xalka si aan ula kulanno codsigaaga
9. Waa maxay qaabka rarka, dekedda asalka iyo waqtiga hogaaminta caadiga ah
Alaabtayada waxaa lagu raraa xamuulka badda ee FCL / LCL.
Dekedda asalka ahi waa Qingdao, Shiinaha, marka xigashooyinkeennu sidoo kale waxay ku saleysan yihiin FOB Qingdao.
Waqtiga hogaaminta caadiga ahi waa 30 maalmood marka la helo rasiid. (wax soo saar, oo aan ku jirin waqtiga gaadiidka)
10. Awood wax soo saar:
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay seddex xariiq oo wax soo saar ah awooddeena waxsoosaarkuna waa in ka badan 80 konteenar / bishii, waxaan ku dari doonaa hal xariiq oo wax soo saar xawaare sare leh wax soo saarkuna wuxuu gaari doonaa 100 konteenar sanadka 2020
11. Waqtiga hogaaminta:
Amarka koowaad, waqtiga hogaamintu waa ilaa 45 maalmood sababo la xiriira xirmada xaqiijinta farshaxanka iyo xirmo cusub oo la daabacay, iyo waqtiga gaarsiinta ee amarrada soo socdaa waxay noqon doonaan 30 maalmood gudahood.
Q1.Ma u dirtay dalal horey?
J: Haa, suuqa ugu weyn ee Bondot wuxuu ku yaalaa USA, sidoo kale waxaan horey u dhoofinay Australia, England iyo dalal kale oo Eurpean ka hor.
Q2.Mar intee in le'eg ayay wershadaadu meheraddaada qabanaysay?
J: Warshadeenu waxay bilaabaysaa wax soo saarkeeda xayawaanka ilaa 2016, waxay ahayd ku dhowaad 5 sano oo waayo aragnimo ah, waxaan la saxeexannay Globalso si aan u balaadhino ganacsigeena.
Q3.Ma haysaa wax soo saar ah oo kayd ah? Miyaad taageertaa ODM?
J: Waxaan leenahay alaab aad u badan oo sahay xayawaan ah oo keyd ah isla markaana waxaan diyaar u nahay inaan markab saarno wakhti kasta.waxaad weydiisan kartaa liistada keydkeena si aad u tixraacdo.Waxaan taageereynaa ODM iyo OEM labadaba.
Q4.Ma i siin kartaa muunadda sheyga ee kormeerkayaga ama tijaabinta ka hor gorgortanka dheeriga ah?
J: Haa, si loo hubiyo inaad balaadhin karto meheraddaada deegaankaaga ayaa lagugu soo dhaweynayaa inaad dalbato muunad bilaash ah oo loogu talagalay sheygaaga
Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso kharashka dhoofinta dhammaan shay-baarka.
Q5. Sidee ayaad uheshay waxtarkeena hadaan amarka dhigo.
J: Macaamiisha waxaa lagula talinayaa inay amarka dhigaan ka dib markaad hubiso muunadahayaga tijaabada ah, si aad u qanciso dhinacaaga sida ugu macquulsan, sidoo kale waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad hubiso warshadeena wakhti kasta oo aad xor u tahay inaad wax su'aalo ah weydiiso iibkeena.
Q6.War goorma ayaan heli karaa qiimaha?
24 saac gudahood ka dib markaan helno baaritaankaaga.
Q7.Mudo intee leeg ayaan filan karaa in tijaabada la ii qaado?
Ka dib markaad bixiso khidmadda muunadda oo aad noo soo dirto faylasha la xaqiijiyay. Muunadaha waxay diyaar u noqon doonaan bixinta 7 ~ 10 maalmood. Shaybaarada ayaa laguugu soo diri doonaa iyaga oo isticmaalaya xawaaraha waxayna imanayaan 3-5 maalmood .Waxaad isticmaali kartaa koontadaada gaarka ah dib noogu soo celi hadaadan xisaab lahayn
Q8. Shuruudaha bixinta?
1.30% TT dhiga, 70% dheelitirka kahor bixinta
2.30% TT dhigaalka, dheelitirka B / L
3.100% TT kahor
Q9.Ma heli karnaa taageero haddii aan leenahay boos u gaar ah suuqa?
Fadlan noo sheeg maskaxdaada faahfaahsan ee ku saabsan baahidaada suuqa, waxaan ka wada hadli doonnaa oo aan kuu soo jeedin doonnaa talo soo jeedin waxtar kuu leh adiga. Si aad u hesho xalka ugu fiican adiga
Hore: Xafaayadaha xayawaanka la tuuro
Xiga: Gabdhaha yar yar ee suufka lagu xiro